Tenga Apple Tarisa kuSpain, zvaunofanira kuziva | IPhone nhau
Chikumi 26, ndiro zuva ratingawana Apple Watch zviri pamutemo kuSpain nedzimwe nyika nhanhatu dzinowedzerwa kune iyo yatotengeswa. Kune asingasviki mazuva maviri kusvikira vazhinji venyu muchinja quartz yenyu, otomatiki kana yedhijitari wachi yakasiyana zvachose iyo inozove yekuwedzera ye iPhone yako.
Iwe unoda kuziva here zvaunofanirwa kuita kuti uve wekutanga ku tenga iyo Apple Watch kuSpain? Ramba uchiverenga uye isu tichakuudza zvese.
1 Tenga iyo Apple Watch kuSpain, nyaya yekumuka mangwanani
2 Yepamutemo Apple Watch mitengo muSpain
3 Kutenga kana kusatenga Apple Watch, dambudziko risingaperi
4 IPhone Models Inoenderana neApple Watch
5 Kana iwe uchifarira iyo Apple Watch, haugone kupotsa ...
Tenga iyo Apple Watch kuSpain, nyaya yekumuka mangwanani
Iyo Apple Watch ichave ichiwanikwa ichi Chishanu, Chikumi 26, zvese zviri mumuviri Apple Store uye muchitoro chekambani chepamhepo. Kuchavewo nevatengesi vane mvumo vachatakura zvikamu zvewachi.
Iwe unotoziva kuti iyo Apple Watch inotengeswa mukati akawanda musanganiswa saka kusarudza iyo yaunonyanya kufarira kunoenderana nekuti une rombo rakanaka sei. Nekuda kweizvi, kuraira kwangu ndekwekuti kana iwe uchida kutenga imwe neChishanu, muka mangwanani kuti usapererwe nemhando dzekutengesa zvakanyanya izvo zvinoenderana nezvandakakwanisa kuona, zvinoenderana nenzvimbo grey vhezheni yeApple Tarisa Mitambo, ese ari musiyano wemamirimita makumi mana nemakumi mana nemasere.
Iyo yakachengeteka bheji ndeyepamhepo Apple Chitoro. Hatizokwanisi kuwana wachi pazuva rimwe chete rekumisikidza asi zvirinani kuti chikwata chedu chibvumirwe kuti chizvigamuchire mumazuva mashoma. Mune ino kesi, kukurumidza kwakakoshawo nekuti nguva dzekuendesa dziri kuwedzera uye kana isu tiri pakati pevekutanga, isu tichazvigashira pakutanga. Sarudzo yekutenga Apple Watch kuburikidza neApple Chitoro pamhepo ichatanga na7: 01 mangwanani.
Izvo zvinokwanisika kuita iyo wachi muunganidzwa muchitoro, ndiko kuti, tinogona kuitenga kuburikidza neApple Store application uye tichaitsvaga kuchitoro chinotikodzera zvakanyanya.
Ndinovimba stock yacho haina kushomeka kudaro sezvazvakaitika mukutanga kwayo kuvhurwa wave uye ino nguva, pane mamodheru akakwana ekuvhara zvido zveruzhinji.
Yepamutemo Apple Watch mitengo muSpain
Heano mitengo yepamutemo yeApple Watch muSpain
Apple Tarisa Sport 38mm: kubva ku419 euros.
Apple Tarisa Sport 42mm: kubva ku469 euros.
Apple Tarisa 38mm: kubva ku669 euros.
Apple Tarisa 42mm: kubva ku719 euros.
Apple Yekutsvaga Yekutsikisa 38mm: kubva ku11.200 euros.
Shanduro yeApple Wakatarisa 42mm: kubva 13.200 euros.
Kutenga kana kusatenga Apple Watch, dambudziko risingaperi
Kana iwe wasvika panguva ino imhaka yekuti hausati uchiziva kana kutenga Apple wachi kana kuti kwete. Handisi kuzoedza kuzvishingisa kuti unozvida, asi ndinoda kuti uverenge zvedu Apple Kuongorora saka icho iwe pachako tora mhedziso uye unokoshesa uku kutenga.
IPhone Models Inoenderana neApple Watch
Usati waenda kunotenga yako nyowani Apple Watch neChishanu, yeuka kuti wachi haienderane neyese iPhone mamodheru akatangwa pamusika. Kuti uyananise uye ubatanidze yako Apple Watch, unoda une imwe yeanotevera iPhone mamodheru:
Kana iwe uchifarira iyo Apple Watch, haugone kupotsa ...
Kugonesa kumirira kusvika Chishanu, heino kuunganidzwa kwezvinyorwa nezve Apple Watch zvaunofanira kuverenga.
Zvinhu gumi nembiri zvinoitwa neApple Watch uye Android Wear hazviite
Zvinhu zvitatu zvekuchengeta mundangariro usati watenga iyo Apple Watch
Edza iyo Apple Watch pane yako ruoko nekuda kwechinhu chakawedzera
Iyo Apple Watch haisi chigadzirwa chakawanda (post-Keynote maonero chidimbu)
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tenga kana chengetera iyo Apple Watch muSpain, zvese zvaunoda kuti uzive
Ndine iyo kwevhiki, ndaigona kuitenga muParis mushure mekuedza katatu. Chokwadi ndechekuti chishandiso chakaratidza kuve chiri nani kupfuura zvandaitarisira, ini ndakabatanidzwa neangu iPhone 3 Plus, chokwadi ndechekuti pandinotsanangura ichi chinyorwa ndine 6% bhatiri rakasara paawa, iPhone 50%. Ndinofanira kutaura kuti ndinoshandisa iyo kuteerera mimhanzi, kugamuchira mameseji, kupindura mameseji, tarisa zvimwe zvishoma zvinhu, ngatiende pa twitter hongu ini handina iyo yakamisikidzwa, ziviso yakawanda haina kugadzikana, iyo chete asi ini ndinogona kuisa chikamu chemuviri pairi, kurova kwemoyo idambudziko rakazara, ndinotarisira kuti neramangwana firmware gadziriso ichavandudza zvakanyanya. Rombo rakanaka kune vese vanotsunga kutenga iyo Apple Watch Chishanu chinotevera, nenzira iyo pane Hoco brand pa eBay uko nhasi ndaraira tambo yesimbi ye € 45, zvakasiyana ne € 35 iyo Apple inotipa.
Ini ndinokusiya iwe chinongedzo
Patricia Sotelo Rodriguez akadaro
Mazuva angu akaverengwa ...
Pindura kuna Patricia Sotelo Rodriguez
Ini pachokwadi ndinofunga kuti Apple Watch chimwe chinhu icho munguva pfupi ichabuda muchitaera uye imwe mari pasina, vanhu vangani vatichaona vachiona iyo iPhone iri muruoko uye neApple Watch pachiuno, kusvika zvino vagara vaine akaedza kubatanidza zvese, foni, bhurawuza, mp3 ... saka haufanire kutakura zvinhu zvakawandisa.
Asi hei, makambani aripo kuti atitengese zvinhu, zvakanaka, ini ndinotarisira kuti vanovandudza iyo iPhone uye neizvozvo .. Ndiri kufara, handione ramangwana reiyo Apple Watch, kunze kwekunge iyo iPhone yashandurwa kuita tarisa .. hombe asi yakanaka munhu wese anoziva zvaari kushandisa mari yavo. Mhoro! 😉
Nugget thumbelina akadaro
Ehe, ndozvavakataura nezve iyo iPhone, asi hei, chokwadi uri kutaura chokwadi ... 😉
Pindura Pepita Thumbelina
Armando Rivera Mori akadaro
Pindura kuna Armando Rivera Mori
Alex Infante Guerra akadaro
Ini ndinotova nayo uye ndinofara
Pindura kuna Alex Infante Guerra
Ana Maria Vazquez Albert akadaro
Ini ndaivewo nayo kweinenge mwedzi uye ndinofara kwazvo nayo. Yakapfuura zvandaitarisira.
Pindura Ana Maria Vazquez Albert
Ini ndinofunga zvakakosha kutaura kuti pawebhusaiti yeApple Chitoro kuSpain zvinonyatsojekesa kuti wachi ichave iripo yekutenga kubva chaiko 7:01. Saka wese pa6: 45 kurova iyo F5 kunge anopenga!
Daniel Mufundisi Rollan akadaro
Tarisa kuna Oscar Gomez Rivera, kana achizokwanisa kutenga ...
Pindura kuna Daniel Pastor Rollan
Zvakanaka, ndichirevesa, kubva pazuva rekutanga, ini ndaitarisira kuutenga uye ndaitarisirawo kuti iyi vhezheni yeApple Watch yaizogara makore angangoita maviri, asi kwete, isu tiri kutotaura nezve vhezheni 2 yeApple wachi, ine kamera , sensors nyowani uye Izvo zviripo zvakagadziridzwa, saka ndanga ndakamirira mwedzi kubva zvabuda, hazvibve kune zvimwe zvishoma uye ini ndinowana vhezheni yepiri iyo yeiyo € 2 inodhura, zvakakodzera kusawana yekutanga yemamodeli. Mhosva yako yekutaura nezveWatch449 😛
yakasimbiswa maminetsi mashanu apfuura nefoni, iko kutenga hakuzove kunowanikwa muzvitoro zvepanyama kana iko kuunganidzwa chete kutengeswa kuburikidza neapuro chitoro, ndatenda
Pindura kuna joxu
Mhoro Joxu, ndiani akatsigira ruzivo rwakadai kwauri? Mutsamba yepamutemo kubva kuApple unogona kuverenga zvinotevera: «Apple Watch ichawanikwa neChishanu, Chikumi 26, kuSpain, Italy, Mexico, South Korea, Singapore, Switzerland neTaiwan, muApple Online Store, muApple. Zvitoro Zvekutengesa uye sarudza Apple Vagadziri Vatengesi. » https://www.apple.com/es/pr/library/2015/06/04Apple-Watch-Arrives-in-Seven-More-Countries-June-26.html
kufona nefoni kuchitoro cheiyo rio kunotenga muvalladolid uye kutarisisa kutengwa kwemaapuro kwakasimbiswa nemapato ese iwo ezvitoro zvepanyama kungori kunwiwa asi kwete kutenga kwakananga
Ivo vakangondiudza muAppStore muMadrid kuti iwe unogona chete kutenga kuburikidza newebhu kuti uchengetedze, uye kuti kana vaine iyo modhi yawakasarudza mudura unogona kuenda unoitora musi iwoyo iwoyo, asi inogona kungotengwa ne kuichengeta pamberi, Uye kana iyo modhi yaunoda ivo vasina, haugone kuichengeta
Unogona here kuongorora kana zvaizoitika zvakafanana muApple Chitoro chePaseo de Gracia ???
Zvinonyadzisa zvakadii zvekushandisa vatengi, izvo zvinoita kuti vanhu vasafare kana vasina gadget yemafashoni, uye kubiridzirwa kana vakadaro.
Kutengwa! Kutumira pakati paJuly 10 na17. S2
10 uye 17?! Yangu inosvika neMuvhuro… sei yako ichitora nguva yakareba kudaro?
Zvakanaka, ini handizive, pakutanga ndaizoisa Chikumi 30 uye pandakabhadhara, ndakazviisa izvo. Apple Tarisa mutambo wachena kesi chena tambo. S2
TaiG inoburitsa inogadziridza kune yayo jailbreak yeiyo iOS 8.3 (yakagadziridzwa)